अब मलेसियामा न्युनतम तलब RM १५०० हुने, भिसा मा परिबर्तन ! - बैदेशिक पोष्ट
अब मलेसियामा न्युनतम तलब RM १५०० हुने, भिसा मा परिबर्तन !
अशोज २९, २०७८ ११;०४ बिहान प्रकाशित
मलेसियाले अष्ट्रेलियाको फार्म लेबर भिसा योजना नलगाउने निर्णय गरेको छ किनकि यो स्थायी बसोबास को लागी तैयार छैन, दीवान नेगारालाई सोमबार भनिएको थियो।
मलेशियाईकरण कार्यक्रम को माध्यम बाट मलेसियन स्थानीय कर्मचारीहरु लेअतिरिक्त RM ५०० वा आफ्नो मासिक तलब को 20% प्राप्त गर्न को लागी योग्य हुने छन्। यो कार्यक्रम बाट स्थानीय लाई प्रोत्साहन मिल्ने र बिदेसी कामदार मा कम निर्भर हुने बाताबरण बन्ने छ।
“अष्ट्रेलिया र मलेसिया एउटै समस्याको सामना गर्छन्, अर्थात् आ -आफ्नो देशमा वृक्षारोपण क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी र यस क्षेत्रमा विदेशी श्रममा उच्च निर्भरता।
“अष्ट्रेलिया र मलेसिया को परिदृश्य एकदम मिल्दोजुल्दो छ जहाँ वृक्षारोपण क्षेत्र जसमा मुख्यतया थ्रीडी (खतरनाक, फोहोर र गाह्रो) काम हुन्छ धेरै स्थानीय कामदारहरु यस क्षेत्र मा उद्यम गर्न को लागी इच्छुक छैनन्,” उनले भने।
यसैबीच, पछि एक पत्रकार सम्मेलनमा, अवांगले रोजगारदाताहरुलाई फाइदा लिई कार्यक्रमको दुरुपयोग नगर्न र कर्मचारीहरुको तलब नघटाउनका लागी सम्झाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो कि कार्यक्रम को उद्देश्य स्थानीय कामदारहरुलाई ती क्षेत्रहरुमा काम गर्न को लागी आकर्षित गर्न को लागी छ जो विदेशी कामदारहरु बाट बढि भरिएको छ।